शब्दकोश: संसद्, मङ्सिर ३ : एलर्जीको पराकाष्‍ठा
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, November 20, 2010
Rabindra Rijal November 22, 2010
कति लाजमर्दो, के के कुरा सामान्य हुँदै जाने हुन् ? शक्तिखोरमा ओकलेको विष पच्यो, फोनमा घुस खुवाउन गरेको त्यत्रो अडियो पच्यो.. १५००० नागरीक पचे .. यो त के नै हो र ?
"बेइज्जत हुन लाइ त इज्जत पनि हुनु पर्यो नी" भन्थे हो र छ ।
Dilip Acharya November 22, 2010
विरोधका हजार व्यवस्था र तरिका हुँदा-हुँदै पनि गरिएको यो "बाँदरे लोकतन्त्र" को अभ्यासले अब भविष्यमा यस्तै वा यो भन्दा अझ ठूला अभ्यास हुनेछन् भन्ने बुझ्न गाह्रो भने भएन ।
बाँकी रविन्द्र जीकै कुरामा सहीथाप्छु म पनि: "बेइज्जत हुनलाई त इज्जत पनि हुनुपर्‍यो नि"